Rugby – «Gold Top 8 Mada» : norombahin’ny FTM Manjakaray ny tompondaka | NewsMada
Rugby – «Gold Top 8 Mada» : norombahin’ny FTM Manjakaray ny tompondaka
Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara ny FTM Manjakaray (Dakar), teo amin’ny fifaninanam-pirenena, taranja rugby «Gold Top 8 Mada», sokajy Elite 1 D1. Resiny teo amin’ny famaranana ny Iarivo rugby club (IRC).
Voalohany teo amin’ny tantarany ny nahazoan’ny FTM Manjakaray ny tompondakan’i Madagasiakara, eo amin’ny rugby sokajy D1. Resiny tamin’ny isa mazava, 45 noho 23, ny Iarivo rugby club, omaly nandritra ny famaranana, notanterahina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, izay feno hipoka.
Samy nahatonga baolina nentin-tanana avokoa ny roa tonta. Efatra ny an’ny Manjakaray, izay vitan’i Naty ny telo ary an’i Dapiso ny iray ka ny telo voatsaran’i Mick. Tsy nisy afa-tsy “essai collectif” tokana ny an’ny IRC, izay tsy matin-dRadadatoa.
Nanahirana ny mpilalaon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny nanakana an’i Gervais sy Nati, rehefa mahazo baolina. Nahay nameno ny kianja izy ireo ka nampanano sarotra an-dry Tiana sy ry Toussaint ny namaky azy ireo. Teo am-pialan-tsasatra, efa nitarika tamin’ny isa 28 noho 9 ny Manjakaray. Ankoatra ny amboara, nahazo lelavola 1.500.000 Ar ny FTM Manjakaray.
Voahosotra ho mpilalao nahafaty baolina be indrindra i Mick (FTM), izay nomena amboara sy lelavola 400.000 Ar ary Radadatoa (IRC) ny mpilalao mendrika, nahazo 600.000 Ar avy amin’ny Gold.
Nahazo ny laharana fahatelo ny TFA Anatihazo, rehefa nandresy ny USA Ankadifotsy, tamin’ny isa 22 noho 15. Tompondaka teo amin’ny vehivavy ny SCB Besarety ary ny UIRC kosa ny teo amin’ny Elite 2 D2.
Nanolotra baolina ho an’ireo ekipa nifaninana ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, nanatrika ny fihaonana, omaly.